Ahoana ny famolavolana bokotra antso ho amin'ny hetsika izay manova - Victor Mochere
Ny fahombiazan'ny antso rehetra dia miankina amin'ny antsipiriany amin'ny famolavolana azy. Na dia ny fiovana kely indrindra amin'ny famolavolana aza dia afaka mamadika ny CTA mijery salan'isa ho zavatra mahagaga. Ny endrika dia tsy zava-dehibe ho an'ny ampahany lehibe amin'ny sary ihany fa ny singanao kely indrindra koa dia voakasik'izany. Na izany aza, ny ankamaroantsika dia mieritreritra toy izany ary mampifantoka ny saina rehetra amin'ny lohapejy sary lehibe, sora-baventy ary typography mahafinaritra. Mbola misy zavatra hafa ankoatra izany.
Ny fahombiazan'ny tranonkala iray dia voafaritra amin'ny hetsika ataon'ireo mpitsidika. Satria ny tranokala dia manampy orinasa iray amin'ny fidirana amin'ny mpanjifa marobe kokoa, tian'ny tompon'ny tranonkala izy ireo hanao karazana hetsika. Ireo hetsika ireo dia mety ho na inona na inona manomboka amin'ny fisoratana anarana amin'ny gazetiboky, fividianana vokatra ka hatramin'ny fanaovana fanadihadiana sy ny toy izany.
Marihina fa ny mpitsidika dia mifandray tsara kokoa amin'ny tranokala rehefa natao tsara ny bokotra antso ho amin'ny hetsika. Ny CTA, amin'ity tranga ity, dia mety ho bokotra iray milaza hoe "mividy" na "misoratra anarana". Amin'ny alàlan'ny famoronana bokotra CTA manintona, azo atao ny mamadika ny mpitsidika liana ho lasa mpanjifa, mpamatsy ary mpanjifa ny tranokala iray.
Ireto misy fepetra tokony hotadidina mandritra ny famolavolana bokotra CTA mahomby.
1. Zava-dehibe ny habeny
2. Ataovy maro loko
3. Ataovy ho azo kitihina ny CTA
Ity no dingana manan-danja indrindra. Raha tianao ny mpitsidika ny tranokalanao handray karazana hetsika amin'ny tranokala, dia tsy maintsy mamolavola ny bokotra CTA ho lehibe sy hita maso ianao, zavatra hitan'ny olona raha vao jerena. Zava-dehibe ny fifandanjana. Ny bokotra CTA dia tokony ho lehibe raha mifanaraka amin'ny singa hafa amin'ny pejy.
Tsy tokony hanelingelina ny famolavolana ny layout lehibe izany. Ohatra, raha te-hamorona gazety mahazatra ianao, ny loko sy ny habeny dia tsy maintsy mifanaraka amin'ny drafitra ankapobeny. Azo atao ny manitsy ny famolavolana ny bokotra CTA miaraka amin'ireo singa hafa amin'ny pejy arakaraka ny habeny, ny loko ary ny fahitana.
Ny loko dia manampy amin'ny fiovan'ny mpanjifa ary manampy amin'ny famaritana ny fahombiazan'ny bokotra CTA. Amin'io hazavana io dia safidy tena ilaina ny loko. Ny loko dia milalao amin'ny sehatra ara-tsaina ho an'ny olona maro. Raha ny marina, misy loko sasany izay manana fiarovana mafy amin'ny kolontsaina sasany. Tena tsara ny mampiasa tetika loko toy izany mba hahatonga ny bokotra CTA ho hita sy hahasarika. Na izany aza, tsy maintsy misafidy loko mifanaraka amin'ny lokon'ny tranokala efa misy. Azo atao koa ny loko mba handanjalanjana ny habeny mba hahatonga ireo singa amin'ny pejy ho hita kokoa.
Ny teboka manontolo amin'ny fanaovana bokotra CTA amin'ny tranokala dia mirodana raha tsy afaka manindry ny bokotra ny mpitsidika. Ao amin'ny tranokala iray, ny famolavolana ny bokotra CTA dia mihoatra noho ny famolavolana fotsiny. Raha ny marina dia manana endri-javatra miasa izy io. Ny hevitra voalohany amin'ny bokotra CTA dia ny hahatonga ny tranokala ho toy ny fiainana amin'ny alàlan'ny fanomezana singa " azo tsapain-tanana". Amin'izany hazavana izany, ny bokotra dia tsy maintsy mijery-mendrika. Noho izany, ny bokotra dia tsy maintsy tazonina lehibe sy mahaliana.
Ny fifanoherana dia mitana anjara toerana lehibe amin'ny famolavolana. Ary raha ny bokotra CTA no resahina dia vao mainka ilaina izany. Satria ny bokotra CTA dia manan-danja amin'ny teboka SEO ihany koa, tsy maintsy mandinika izany amin'ny fomba roa.
Loko bokotra vs Lokon'ny lamosina - Raha mitovy amin'ny loko ambadika ny lokon'ny bokotra CTA, dia mety ho tsy voajery izany. Ny hevitra dia ny hampisongadina ny bokotra tsy misy fifandonana amin'ireo singa sy loko hafa amin'ny pejy
Loko soratra vs loko bokotra - Ny zavatra farany tadiavinao dia ny mpitsidika anao dia sarotra ny mamaky ny lahatsoratra eo amin'ny bokotra. Noho izany, ankoatra ny fisafidianana, endritsoratra azo vakiana, dia zava-dehibe ihany koa ny fisafidianana loko mifanaraka amin'ny endritsoratra. Araka ny filazan'ny ankamaroan'ny SEO sy ny manam-pahaizana momba ny varotra nomerika amin'ny indostria, dia tsy maintsy misoroka ny loko izay eo amin'ny bokotra mihitsy na ny loko sarotra ampiarahina. Ohatra, raha fotsy ny bokotra CTA-nao ary misafidy loko mavo voasarimakirana ho an'ny lahatsoratra ianao, dia mety ho sarotra ho an'ny mpitsidika ny mahazo izay voasoratra.
Aorian'ny fikarakarana ny fizarana famolavolana dia zava-dehibe ny mametraka ny bokotra CTA amin'ny toerana mety. Na izany aza, ny fametrahana ny bokotra CTA dia miankina amin'ny fisehon'ny pejy. Amin'ny ankapobeny, ny bokotra CTA dia apetraka "eo ambonin'ny vala". Ity dia teny an-gazety tranainy izay midika fa ny zavatra manan-danja dia tsy maintsy eo amin'ny pejy voalohany, na eo ambonin'ny vala amin'ny gazety mba hisarihana ny saina indrindra. Ny hevitra mitovy dia azo arahina amin'ny fametrahana ny bokotra CTA. Amin'io hazavana io, ny bokotra dia tsy maintsy apetraka eo an-tampon'ny pejy ahafahan'ny mpitsidika mahita azy avy hatrany tsy mila mihodinkodina miakatra na midina.
NuxGame: Vahaolana feno ho an'ny orinasa mpanao boky